Ar reer Gaalkacyo,yaan lagu qeylin ee si tartiib ah, dhagta wax ha loogu sheego=Nasashada Jimcaha. Q-153aad= - Latest News Updates
Ar reer Gaalkacyo,yaan lagu qeylin ee si tartiib ah, dhagta wax ha loogu sheego=Nasashada Jimcaha. Q-153aad=
1 – Nin iyo Xaaskiisii, ayaa waxaa u soo Qadeeyay, Ninka Adeerkii oo Sheikh ah. Markii uu baxayay ayuu Miiska ku arkay Kitaab Qur’aan iyo 1000 Dollar oo dhinac taal. Markii uu tagay Adeerkii ayaa la waayay 1000kii Dollar, waxaa la yiri: Adeerku Tuug ayuu ahaa ee hadda waxba yaan la ceebeeyn.
Sannad kadib ayaa Adeerkii mar kale u soo Qadeeyay isla Reerkii. waxa ey ku yiraahdeen: Adeeroow Sannadkii hore Maalintii aad naga tagay 1000 Dollar ayaa naga dhuntay. Waxa uu ku yiri: Kitaabkaa Qu’raanka ayaan dhax galiyay. Waana laga helay. (F.S:1aad).
( War kitaabada guryaha idiin yaal, yaan Qolka camiraad looga dhigin ee hala aqriyo. waa iga talo).
2- Asgari Reer Gaalkacyo ahaa oo Magaaladda Marko loo soo bedelay , ayaa waxa uu guursaday Gabar Reer Marko Cadey ah. Maalmo kadib ayuu Aabeheed u yimid, kuna Yiri: Adeer Gabadhaada waan kuu furayaa. Qdaygii ayaa yiri: Igaarkeey, Maxaa dhacayne? Mugoo, Coowdi bileeyso.
Ninkii ayaa yiri: Adeer, Gabadhaadu Sariirta kuma fiicno. Odaygii ayaa yiri: Ar Reer Gaalkacyaa!!! , Igaarkeey adi Sariir lee sheegoow heeysaa, Sariir ku diin miyaa tihiin. Sariirta haddeynan ku fiicneyn, igaarkeey, Dhulka ama kursiga ma ku fiirisay.
(Siyaasiyiintu hadeeyna ku fiicneyn Siyaasadda, ma lagu fiiriyay, Taageerada Manchester, Taxi & Tareela wadoowga, Cunta kariska, iyo Bootada)
3-koo Qorax joog ah oo iska dhigayay Nin Qurbaha ka yimid, ayaa Mooto Bajaaj la soo raacay Gabar aad u qurxoon, oo wadata Telefon “iPhone 8” ah , isaguna “Nokio Niicle” ah oo xarig Dhaxda uga xiranyahay ayuu jeebka kala soo baxay, waana iska damiyay si aan loo soo wicin. Niiclihii ayuu dhagta Saartay , waxa uuna la hadlay Qof aan jirin, kuna yiri: Waad ogtahya Maalmahaan waxaan tijaabinayay Nolosha Dadka caadiga ah, sida ey ku nool yihiin iyo sida ey uga gudbaan wadooyinka xiran, ka waran Bajaaj ayaan saaranahay maanta is aan wax uga ogaado Noloshooda, Galabta Gaariga Mercedes-ka ah iska dhaaf ee Toyotaha aan xabbadu Karin ii diyaari, Berri London oo ah Caaimadda Turkiga ayaan u dhoofayaa.
Kadibna telefonkii ayuu Jeebka galiyay. Gabdhii oo qoslee ayaa soo fiirisay. Qorax joogii waa farxay isga oo is leh, Gabadhu waa kaa heshay . waxa ey ku tiri: Ruux wanaagsan ayaad tahay oo doonayo in uu ka warqabo Nolosha Bulshada, ee hoo Beterigaan, waa kii Telefonkaaga xarigu ku xirnaa, waxa uu kaa dhacay markii hore ee aad jeebka ka soo bixineeysay. Aw Qorax joog war waxaa ugu dambeeysay, Bajaajta jooji.
( Qorax joogoow, Beenta Koobiga ahi yeyna idinku Banjarin, Gabdhaha Luuqadii aad isla taqiineen kula hadal)
4- Oday Reer Gaalkacyo ahaa ayaa Xamar Dayaarad ka raacay isga oo ku sii jeeda Gaalkacyo, Markii ey Dayaaraddu Hawada gashay, ayuu Duqii ka soo kacay Qeybtii Dambe ee “Economic Class-ka” ee uu fadhiyay, sii uu u fadhiisto Qeybta hore ee “Business Class-ka”, Gabdhii Dayaarada ka shaqeyneysay ayaa ku tiri: Adeer Qeybt BC waa qaali, isku Lacag ma ahan ee halkaagii Fadhiiso, waa ka diiday, Rakaabkii ayaa ku yiri: Adeer waa runteed Gabadha, waa kala Lacag, halkaa Dadka Lacagta Badan la baxay ee Akhyaartaa ayaa fadhiista.
Odaygii oo aad u qeylinaya ayaa yiri: War Anniguba Laba tiro oo Ariya iyo Baraag ayaan leeyahay, Akhyaarta Gaalkacyana waan ka mid ahay, wallee iyo Billee in aanan la fadhiisan Caruurta iyo Haweenka ,Qeybta Dambe.
Kaaliyihii Duuliyaha ayaa loogu yeeray, gooni ayuu ula baxay, Dhagta ayuuna wax ugu sheegay, Duqii halkiisii ayuu ku noqday isaga oo xabeebmay, Koob Biyo ahna waa loo geeyay. Rakaabkii ayaa weeydiiyay Kaaliyihii Duuliyaha, war Duqa maxaad u sheegtay?. Waxa uu yiri: waxaan ku iri: Adeer, Qeybta hore ee Dayaaradu Gaalkacyo sii mari meeyso. (F.S:2aad)
( Ar reer Gaalkacyo, yaan lagu qeylin ee si tartiib ah, dhagta wax ha loogu sheego)
5- Nin Aroos ahaa ayaa Xaaskiisa oo aad u Buurneeyd, markii lagu soo Mehriyay ee uu Guriga keenay ayuu kor u qaaday. Waxa ey ku tiri: intii aan Saaxiibada aheyn weligaa kor iima qaadin ee Caawa ma Farxadii ayaa kaa badatay.
Waxaa uu yiri: Maya, ee Shiikhii ayaan Meherka kadib igu yiri, Culeyska Alla ha kula qaado. Waxaan go’aansaday in aan gacmaha kor u tago Anniga oo culeyskaaga sido oo aan Alla ka baryo, in uu culeyska ila qaado ama iga yareeyo. ( F.S: 3aad)
( Horta Madaxda ( Mid Qaran, Mid Gobal iyo Xildhibaanadda) markii la doortay kor ma loo qaaday, oo mala yiri: Alloow, Beentooda naga yareey)
6- Nin Sakhraan ah ayaa isaga oo Xaaskiisii oo uur leh la socdo ayaa Dumaashidii ka hor timid. walaasheed ayey Caloosha ka taabatay kuna tiri: Maashaa Allaah, Guurkaagii kuma khasaarin.
Kii Cabtooyda ahaa isna Xubin Jirkiisa ka mid ah ayuu gacanta saaray, kuna yiri: Dumaashi anna halkaan iga taabo, oo ku dheh Maashaa Allah, Adna shaqa fiican ayaad qabatay. (F.S: 4aad)
( Odayaasha dhaqanku ma iska dhaafeen Maseeyrkii ahaa, haddii Qolo kale Nin karti leh xil loogu magacaabo, in ey iyana Mid Doqon ah ,yiraahdiin annagana kan ha naloo magacaabo, ileeyn 4.5 shuruud maleh, Reer Hebel ma yahay Bis)